Etu esi ehicha ihe di nkpa mmanu mmanu | AromaEasy
Etu esi ehicha ihe di nkpa
Ihe na January 18, 2020 Nwere ike 30, 2020 by Aromaeasy
8 Usoro dị mfe iji hichaa mkpa mmanụ gị dị mkpa
otu esi ehicha diffuser
*** NA-EGO KA EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO SARA NA EGO OGO KWURU GHARA NA-EGO.
1. Jiri mmiri dị ọcha jupụta onye na-enye gị mmiri dị ọcha. Gbaa mbọ hụ na ọ dị n’okpuru Max.
2. Tinye mmanya ọcha n'ime akpa, mmanya kwesịrị ịdị ihe ruru 10 tụlee. Site na usoro a, ọ ga - enyere gị aka iwepu mmanụ na - agbatị n’ime onye na - egbochi ya.
3.Ahapụ onye na - enye ya ihe na - agba ọsọ ruo ọtụtụ minit. N'oge ọrụ ahụ, ngwakọta mmanya mmiri na-amalite ịgbasa na onye na-agbasa ihe niile ma hichaa ya.
4.Bere onye na-akpachapu ya kpamkpam.
5. Iji mpempe owu bekee n’ime mmanya. Jiri akwa ahu were hichaa ihe ojoo n’onu na akuku di nkpa.
Gbaa mbọ hụ na ọ nweghị ọghọm ọ na-afọdụ ruru unyi.
6. Jiri mmiri dị ọcha sachaa ya.
7. Mee ka onye na –eme ka ihe na - ezighi ezi mechie.
8. Jiri akwa akọrọ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri ya wee hichaa diffuser ma kpochaa ya nke ọma.
Biko mara na ụfọdụ ndị gwara m na iji mmanya iji hichaa onye na-enye ihe na -eme ka akwụkwọ ikike ha dị nfe ghara ịba uru - ọkachasị maka ndị na - eto ndu biri. Ọ bụrụ na ngwaahịa gị ka dịkwa n’okpuru ikike, ọ kacha mma ka ịkpọtụrụ ndị ahịa ma ọ bụ nke ndị na-ere ngwaahịa nke onye ahịa gị wee gbalịsie ike ịgwọ ụlọ ọ bụla iji sachaa ngwaahịa gị. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị nrụpụta na-enyekwa gị ndụmọdụ gbasara nhicha ahụ na akwụkwọ ntuziaka ha. Biko rụtụ aka na usoro ndị a tupu ịmalite usoro nhicha ọcha m kwuru.
Kedu ihe bụ mkpa mmanụ mgbasa dị mkpa
Mkpa mmanụ dị mkpa na-eme ka mmanụ dị mkpa ghara ịdị, ya mere a ga-agbasasị isi ísìsì ahụ n'ikuku.
Ihe ndị na-enye Mgbasasị AromaEasy bụ ezigbo uru ị ga-edebe n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọrụ gị.
Dabere na mmanụ ndị dị mkpa, ha na-asacha ikuku ị na-eku ume ma na-eme ihe ị na-achọ, nke nwere ike ịbụ site na ime ka uche gị dajụọ ma nyere aka ihi ụra, ịmụrụ anya ma mee ka uche gị dị ala site na ibelata nchekasị na nchegbu.
Uche zuru oke nwere ike inwe nnukwu mmetụta n’inyere gị aka imepụta ihe na ihe ọhụrụ.
Mkpa mmanụ dị mkpa na-eme ka ndụ anyị ka mma
Nke a ga - abụ ezigbo ahụmịhe mgbe ị na - eji mmanụ dị mkpa eme ihe maka na ọ na - eme ka ahụ ruo gị ala ma nwee ntụsara ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Kaosinadị, ọ bụ nsogbu na mgbe onye na - akpagbu ya ga - amalite ịrụ ọrụ ọfụma ma ọ bụ gbarie.
Ma echegbula, mgbe ụfọdụ naanị ihe ọ chọrọ bụ nhicha dị mma.
Mana ọ bụrụ na ọ banye na nsogbu ụfọdụ buru ibu, ọ nwere ike ịchọ ụzọ ndị ọzọ iji dozie ya.
M ga-akọwapụta ihe kpatara nsogbu ndị ọ na-akpatakarị na ụzọ isi dozie nsogbu mmanụ dị gị mkpa dị n’ụlọ.
Y’oburu na inwere mmanu di nkpa.
Twokpụrụ abụọ mgbe ị na-eji mmanụ nkesa dị mkpa:
1. mmezi nke oge
Ọ dị oke mkpa. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike bụrụ ihe ịma aka na mbụ, ị ga - eme ka usoro nhicha nhicha ihe na idobe ya onwe gị, karịa ịkwụ onye ọzọ ụgwọ maka gị ka ọ meere gị ma ọ bụ na - ele onye na - akpata ya ka ọ daa, ị ga - akwụ ụgwọ nnọchi.
Ọ bụ nsogbu na-enweghị atụ ịdọrọ ma ọ bụ zighachite onye na-akpasu ya dị ka mkpocha ya, ọ ga-abụ nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na onye na-agbanwe ya ga-etisasị naanị n'ihi na i hichachaghị ya nke ọma.
2. Biko gụọ akwụkwọ ntuziaka maka ọgwụ aromatherapy tupu ojiji.
Recommendationszọ nkwanye nhicha na usoro dị mma ga-adabere na onye nkesa gị na-eji. Tupu iji ya, biko gụọ akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa aromatherapy ngwa ngwa ka ị mara ihe ị ga - eme iji nọgide na-arụ ọrụ kacha mma na nsonaazụ aromatherapy kachasị dị mma.
Mgbe ọ bụla ojiji
Otutu ntuziaka onye nrụpụta ga - agwa gị ka ihichaa onye na - ekpocha ya mgbe ị gachara iji ya, nke nwere ike ịdị ka ọ karịrị akarị na mbụ.
Mgbe m nwere igwe mgbasa ozi mbụ m, emechaghị m nke ọma.
Ahapụrụ m mmiri na mmanụ dị oke mkpa na onye na-akpaghasị ọbara wee chee, "oh, aga m eme ya ọzọ echi."
Biko emehiela otu ahụ m mere na mbụ.
Mmanụ dị mkpa nke ejiri mmanụ nkesa dị mkpa bụ corrosive kinda. Iji hụ na ndụ ọrụ yana oke mmanụ dị mkpa, a ga-asacha ya mgbe ejiri ya.
Na mgbakwunye, isi na nsị nke mmanụ gara aga nwere ike belata ahụmịhe oriọna gị mgbe ị na - eji ụdị mmanụ dị na onye na - enye gị ihe.
Yabụ, mgbe ị gachara were were, biko sachaa mmiri niile na mmanụ dị na ebe na - ekpochapụ ma kpochaa ngwa ngwa, akwa nhicha akwụkwọ ma ọ bụ ụfọdụ akwa.
Nchọpụta nsogbu onye mgbasa gị
N'ihe eji eme ihe kwa ubochi, ndi na enye nsogbu nwere ike ihu otutu nsogbu ma obu onodu oge site na oge.
Ma echegbula! Enwere ike idozi nsogbu kachasị ọsọ ọsọ site na isoro usoro ole na ole dị n'okpuru.
Ndị a bụ ụzọ iji dozie nsogbu ndị a:
Mgbe onye nkesa gị enweghị ike
Lelee na etinyere nkwụnye ahụ na ike ike.
Gbaa mbọ hụ na mmiri dị n’ime akpa ahụ ma mmiri mmiri ahụ ziri ezi.
Lelee na ihe nkwanye ike di nkenke.
Lelee na ebe a na-abanye ike ya n'ime ihe nkesa.
Kpochaa onye na-eme ihe dị na ya, hapụ ya ka ọ kọọ ụbọchị ole na ole, wee fụnye ya.
Mgbe mgbasa ahụ dị obere
Lelee ma mmiri mmiri ahụ dị mma.
Gbaa mbọ hụ na mmanụ dị mkpa emechighị ya iji gbochie fan.
Mgbe ị hụrụ uzuzu uzuzu, nye onye na-enye ya ihe dị ọcha.
Ghagharia nyocha ịgba nke onye mgbasa gị ma hụ na ị tụchighị.
Ọ bụrụ na mmiri dị na onye na - enye ihe na - ekpo ọkụ, mmiri dị elu
Nke a pụtara na onye na-agbasa ihe jupụtara na mmiri nwere nnukwu mmiri.
Buru ụzọ gbanyụọ ma kwụpụ ike diffuser.
Wepu onye na-enye ihe ndozi wee mee ka ọ gbadaa.
Tinyeghachi onye diffuser ka ọ dị na mmiri kwesịrị ekwesị wee malitegharịa onye na-ahụ maka ya.
Ọ bụrụ na onye na-enye nsogbu adịghị arụ ọrụ, nke a pụtara na ọ jujuola ma mebie ya, mgbe ahụ ịkwesịrị izipu arịrịọ maka ịrụzi ya.
Mgbe ngosipụta ọkụ na-enwu ma diffuser anaghị amalite
Onye nkesa ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ nwee mmejọ achọpụtala.
Gbanyụọ diffuser ma wepụ ya.
Kpofu onye na-enye ya ihe dị iche na ya ka ọ nọrọ jụụ nwa oge.
Tinyeghachi onye na-ahụ maka mmiri na mmiri dị mma.
Jikọgharịa ma malitegharịa onye mgbasa ahụ.
Ọ bụrụ na amalitere onye na-agbanwe ihe ahụ, ọ nwere ike ịdị mkpa ka onye ọkachamara nyocha maka nyocha ma ọ bụ ndozi.
Iji ọgwụ diffuser iji mmanụ ndị dị mkpa dị ezigbo mma. Agbanyeghị, ịkwesịrị icheta na ọ dị mkpa ka ịsacha ma dozigharị ya mgbe niile iji jide n'aka na ọ emerụghị. Gụọ akwụkwọ ntuziaka onye na-ahụ maka gị ka ị mata otu ị ga - esi jiri aka gị hichaa akụkụ ahụ ọfụma ma mara otu esi egbochi mbido imebi na mbu.
Etu ị ga-esi họrọ diffusers?
Kedu ka esi eme mmanụ na-arụ ọrụ
Mmanụ dị mkpa maka mgbu azụ